Biyya Arabaa 'qoricha fedhii saalqunnamtii dubartii cimsutti' deebiyaa jirtu - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Qorichi Flibanserin jedhamu kun faarmaasota Masirii keessatti omishama
Masiriin biyya Arabaa keessaa qoricha dubartoota saalqunnamtii iratti fedhii isaanii cimsu akka omishamuufi gabaaf dhiyaatu hayyamte ishee jalqabaadha.
Qorichi kun akkuma qoricha dhiiraaf saalqunnamtii irratti cimsuuf gargaaru 'Viagra' jedhamu kan dubartootaaf saalqunnamtii irratti fedhii akka qabaatan cimsuuf gargaarudha.
Ofii gabaan qoricha kanaa biyya akka Masirii hedduu hawwaasa safuufi of-qabuun beekamaa ta'etti gabaa qabaataa laata? Gabaastuun BBC Sally Nabil kana hordofteetti.
"Waan akka dadhabuufi fajajuu tokkotu natti dhaga'ame, onneen koo hedduu saffisaa akka jiru garuu natti dhaga'ama."
Kan akkas jettu Leeyilaa kan yeroo jalqabaatiif kiniinii qoricha fedhii saaqunnamtii dabalu ("female Viagra")- yookaan ammoo jecha keemikaalaa ittiin waamamu flibanserin jedhamuun waamamu fudhattedha.
Qorichi kun yeroo jalqabaatiif akka hojiirra ooluuf kan hayyamame US keessatti waggaa sadiin dura ture. Yeroo ammaa kana ammoo kampaanonni Masirii biyya isaanii keessatti omishuu jalqabaniiru.
Leeylaan (maqaa ishee isa dhugaa miti)- haadha warraa safuu beektuufi of-qabduu taateefii umuriin ishee walakkeessa 30 keessa kan jirudha.
Akkuma dubartoota Masirii hedduu waa'ee rakkoowwan qunnamtii saalaafi fedhiiwwan saalqunnamtii dubbachuun laguu itti ta'ee waan sodaattuuf of dhoksuu filatteetti.
Erga gaa'ela keessa waggoota 10 turtee booda, qoricha kana fayyadamuu murteessiteetti. Kanas kan gochuu barbaadde, "calliseedhuma waanan baruuf fedhuu horadheef" jetti.
Leeylaan rakkaa fayyaa hin qabdu. Kanaaf qoricha kana ibsaafi ajaja ogeessa fayyaa malee bitatti. Shaakalli akkas qoricha ibsaafi ajaja ogeessa fayyaa malee bitachuun kun Masirii keessatti baratamaadha.
"Ogeessi faarmaasii qorichicha galgala galgala yeroo hunda kiniinii tokko tokko torban muraasaaf akkan fudhadhu natti hime. Miidhaa maddee/ kan qoricha kana fayyadamuun walqabtee dhufu hin jiru naan jedhe," jetti.
"Aniifi abbaan manaa koo maal akka ta'u ilaaluu barbaanne. Takkaa yaaleen, isa booda garuu itti hin deebiyu."
Biyya Masiriitti gaa'ela hiikuun dabalaaa dhufeera. Miidiyaaleen biyya keessaa tokko tokko kanaaf sababa yeroo dhiyeessanis rakkoowwan qunnamtii saalaa waliin walqabatanii dhirsaafi niitii gidduutti uumaman ta'a jedhu.
Warshaan qoricha flibanserin jedhamu kanaa biyya Masirii akka jedhutti dubartoota Masirii 10 keessaa sadii fedhii saalqunnamtii gadi bu'aa ta'e qabdi. Lakkoofsi kun garuu tilmaama calliseeti malee isa sirrii miti sababiin isaas akka biyyaatti lakkoofsa sirrii argachuun rakkisaadha.
"Wallaansi akkasii kun asitti barbaachisaadha-kun jijjiirama jbaadha," jedhu bakka bu'aan kaampaanii Ashraaf Al Maraghy.
Goodayyaa suuraa Beeksisa faarmaasii Masirii keessatti argamu
Akka Maraghy jedhutti qorichichi kan rakkoo hin uumneefi bu'a qabeessadha. mallattoowwan dadhabbiifi fajachuu yeroon booda dhiisaa deema jedhe. Ogeessonni faarmaasiifi doktoraanni hedduun garuu kana irratti walii hin galan.
Ogeessi faarmaasii ani itti dubbadhe tokko qorichichi dhiibbaa diiga "sadarkaa baayyee yaachisaa ta'etti" gadi buusuu danda'a jedha.
Murad Sadiq ammoo Kaayiroo Kaabaatti faarmaasii isaa keessatti qoricha kana gurgurata. Yeroo namoonni kana bitachuuf dhufan miidhaa inni qaqqabsiisuu danda'u sirriitti ittin hima garuu "isaan didaniidhuma bitatu."
"Guyyaatti giddu-galeessaan namoonni 10 dhufanii qoricha kana ni bitatu. Dubartoonni yeroo hedduu gaafachuudhaaf ni qaaneffatu."
'Waan isaa hunduu kan sammuu namaa keessa jirudha'
Jechi miidiyaa biyyattiidhaan 'viyaagaaraa dubartootaa ("female Viagra") njedhu sirrii miti jedha. "Kan akkas jedhe miidiyaadha nu miti."
Kiniiniin viyaagaaraa (Viagra pill) dhiigni gara qaama saalaa dhiiraatti daddarbu foyyaa'ee akka qaamni saalaa isaanii dhaabbachuu dadhabu akka jabaatu taasisuun gar gaara. Qorichi kan dubartootaa flibanserin jedhamu kun garuu akka farra mukaa'uu/dipireeshiniitti gargaaruun fedhii saalqunnamtii dadabuudhaaf fayyada.
Goodayyaa suuraa Qoricha Flibanserin Masiritti gurguramu
"'Viyaagaaraan dubartootaa jecha akka hin taanetti hojiirra ooledha," jetti gorsituun dhimma saalqunnamtii Hebaa Qotb.
"Dubartoota miidhaa qaamaa ykn samuun irra gaheef hin hojjetu," jetti ogeettiin kun.
"Dubartootaaf, saalqunnamtiin adeemsa miiraati. Kan jalqabu sammuu keessatti. Dubartiin abbaan manaa ishee ishee hacuucu ykn akka hin taanetti qabatu walitti dhufeenya sirrii qabaachuu hin dandeessu. Wallaansi fayyaa kamiyyu kana hin fayyisu."
Akka Aadde Qotb jettutti qorichi flibanserin jedhamu kun bu'aan isaa hanga miidhaa isaa hin ga'u. "Dhiibbaa dhiigaa gadi buusuun rakkaa hamaa inni qaqqabsiisudha," jechuun akeekkachiifti. '
Dubartoonni masirii waa'ee fedha saalqunnamtii isaanii waliin walqabsiisee hanga sadarkaa isaanitti tolutti dubbachuu irra ga'uudhaaf karaa fagootu isaan eeggata.
Lammiin Keeniyaa 'kondomii tarsa'aaf' mootummaa himate
Leeylaan "rakkoo dhimma saalqunnamtii waliin walqabate gaa'ela isaanii keessatti mul'atu irraan kan ka'een kan wal hiikan" dubartoota hedduun beeka jetti.
"Yoo abbaan manaa kee saalqunnamtiidhaan dadhabaadhallee ta'e, akka wallaansa argatu gargaaruun ni danda'ama. Kun yoo abbaa manaa jaalala namaaf qabu yoo ta'edha. Abbaa manaa rakkisaa kan qabdu yoo ta'e garuu hangama siree irratti ykn hitillee irratti cimaa ta'eyyu isaaf fedhiin qabdu ni bada. Dhiironni garuu kana hin hubatan."
Yoo reefuu kan jalqabamu ta'ullee jedha abbaan qabeenyaa faarmaasii Obbo Sadiq ammoo gurgurtaan flibanserin baayyee abdachiisaadha, gara fuula duraattis ni dabala jennee eegaa jirra jedha.
Gorsituun sirna saalaa kun kan jettu, "Dhiirri tokko yeroo fedhiin saalqunnamtii haadha warraa isaa foyyaa'uu didutti, qorichuma sana illee fudhattee booda jechuudha, isheetiin ykn rakkoo qorichi sun hojjechuu dhabuu balaalleffata malee rakkoo dhibee qabu hariiroo isaan gidduu jiru miti. Innumayyu rakkoo kana sababii godhachuudhaan ishee gatee kan biraatti darba. "